GGO Ebla 15 fi Hundeeffama Waggaa 7ffaa Qeerroo Bilisummaa Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname. « QEERROO
GGO Ebla 15 fi Hundeeffama Waggaa 7ffaa Qeerroo Bilisummaa Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname.
April 13, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	Leave a comment
Ebla 15 Guyyaa Gootota Oromoo fi Hundeeffamuu Jaarmiyaa Sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoo Waggaa 7ffaa Ilaalchisee Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname.
Nuti Qeerroon Dagaggootni Oromoo, Biyyi keenya Oromiyaa fi waliigalatti ummatni Oromoo bal’aan bu’aa Gootota Oromoofi firii kaayyoo Goototni Oromoo irratti wareegamaniiti. Guyyaan Gootota (Wareegamtoota) Oromoo Ebla 15, 1980 irraa eegalee waggaa waggaan kabajamaa fi yaadatamaa yoona gahe. Gootota gaafa alagaan biyya Oromoo cabsuuf ittiduule diina biyya ofii irraa ittisuuf jecha diddaa gabrummaa irratti wareegaman dabalatee Qabsaawota Bilisummaa Oromoo bifa adda addaan hanga har’aatti wareegama baasan hunda guyyaa kana yaadatna. Kana waliin, Guyyaan Gootota Oromoo, guyyaa miseensoti Adda Bilisummaa Oromoo, Qeerroon Bilisummaa Oromoo, deeggartootniifi ummatni Oromoo bal’aan kaayyoo Goototni Oromoo qaqqqaaliin irratti wareegaman galmaan gahuuf irbuu isaanii itti haaromsanidha. Seenaa fi imaanaa gootonni Oromoo wareegamaniif galmaan gahuuf jecha Qeerroon Bilisummaa Oromoos guyyuma kana irratti Ebla 15,2017 Oromiyaa keessatti sirnaan hudeefamee sochii seena qabaeessa eegalee har’a gahee jira.
Seenaa ummata Oromoo keessatti Ebla 15, guyyoota kaan irraa wanti adda taasisu bara 1980 keessa guyyaa kana hoogganootni siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo akka qaroo ija Oromootti ilaalaman Kiristaana-Islaamaafi lagaan osoo wal hinqoodin jumulaan wareegama qaalii kanfaluun tokkummaa saba Oromoo dhiiga isaaniin mirkaneessan ta’uu isaati. Hanga har’aattillee hoogganootaa fi miseensoti Adda Bilisummaa Oromoo, Qeerroo Bilisummaa Oromoo, deeggartootaa fi Sabboontotni ummata Oromoo, qabsaawotni bilisummaa bifa adda addaan qabsoo keessatti qooda qaban walumaagala sab-boontoti Oromoo xurree hoogganooti ABO gaafa duraa saaqan irra bu’anii mirga abbaa biyyummaa Oromoof osoo falmaa irra jiranii wareegaman kuma hedduutti lakka’amu.
Guyyaa Gootota Oromoo Ebla 15 ka’umsa godhachuudhaan akeekaafi kaayyoo GGO galiin ga’uuf Qeerroon Bilisummaa Oromoo jala bultii GGO Ebla 15 kan bara 2014 sababeeffachuun haala yeroo irratti ibsa waliigalaa erga kennee booda Ebla 11,2014 Sochii Warraaqsa FDG bifa ijaarameefi qindaa’een dhoosuun Mootummaa abbaa irree Wayyaanetti xumura gochuuf Warraaqsa Biyyoolessaa Oromiyaaf bu’uura kaa’an.
Seenaan Ebla 15, GGO Sochii Warraaqsa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG sadarkaa idil-addunyaatti beekamtii argate waliin seenaa addaa qabaachuu isaa Ibsa Qeerroon Bilisummaa Oromoo Ebla 2014 kennee Warraaqsa dhoosee kaayyoo GGO dachaan tarkaanfachiise irraa hubachuun nidanda’ama. “Haala Yeroo Ilaalchisee Ibsa Sochii Dargaggoota Biyyoolessaa Irraa kenname (Qeerroo Bilisummaa) Ebla 2,2014 Jimmaa Bakka bu’oonni Qeerroo Bilisummaa Oromoo godinoota adda addaa irraa walitti dhufuun Ebla 1 fi Ebla 2,2014 walgahii guyyaa lamaaf gaggeefatan irratti haala yeroo uummata Oromoo fi Qabsoo FDG Bilisummaa Oromoo daran jabeessuufi haala waliigala raafama siyaasa Impaayera biyyattii irratti marii bal’aa gochuun ibsa armaan gadii dabarsee jira.
Duguuginsa Sanyii (Genocide), moototni Habashaa erga Oromoo afaan qawween cabsanii bulchuu eegalanii hanga har’a jaarraa 21ffatti dabaree aangootti dhufan raawwatanif Oromoon tolee jedhee jilbeeffatee bitamee, hinbulle. Utuu falmatuu diina kufaa kuffisaa har’a as ga’ee; Qabsoo Bilisummaa Oromoos bu’aawwan dagatamuufi eenyuyyuu haaluu hindandeenye dhiigaafi lafee isaa itticabsee fidee har’a dhaloota haaraa nu Qeerroo Oromoo qaqqabsiisee jira. Haata’uu malee, ilmaan mootota Habashaa kaleessaa har’allee Qabsoo Oromoo dhaamsuuf Oromiyaa deebisanii qabachuufi sirnoota abbootii isaanii sirna nafxanyaa kaleessaa deebisuuf nurraa hindhaabbanne hojii idilee isaanii godhachuun hanga sadarkaa mana maxxansaa banachuun Oromoo arrabsuu, xiqqeessuu, tuffachuu fi Oromoon biyya hinqabu jechuu irra gahani jiru. Nafxanyaa har’a qawweefi golgaa dimookiraasiin biyya lafa gowwomsaa jiru of jabeessuun umrii bittaa isaa dheereffachuuf yeroo kallattii hundaan tattafatan ifatti ba’een mul’acha jira, sochii farrummaa Oromoo nafxanyota kaleessaafi har’a kana dhaabamsisuuf Oromoon bakka jiru hundaa dammaqee qalbiin qabsoo FDG keessatti qooda guddaa ba’uu qaba.
Mootummaan abbaa Irree Wayyaanee bulchiinsa Magaalotaa Oromiyaafi saaminsa qabeenyaa uummata Oromoofi uummaata Oromoo qe’eefI qabeenyaa irraa buqqisuuf bifa haaraan karoorfatee sochii irra jiraachuu ifatti karaa Miidiyaa of harka qabuun labsii dabarfatee jira. Sochii kana dhaabsiisuufi bulchiinsa Magaalaa Finfinnee to’achuuf, qabeenya uummata Oromoo saaminsa irraa hambisuuf, akkasumas, Oromoon nagaan qe’eef qabeenya isaa irratti abbaa biyyummaa akka mirkaneeffatuuf bakka jirru maraa haalduree tokko malee maqaa Oromoo jettu qofaan waliif dirmannee qabsoo FDG jabeessuun bara sirna nafxanyaa kaleessaafi har’atti xummura haa goonu jechuun waamicha Oromummaa ilmaan Oromoo hundaaf nidabarsina.
Ilmaan Oromoo gooftummaan diinaa suga isinitti fakkaatee mootummaa EPRDF fi Wayyaanee duukaa dhaabbachaa jirtan guyyaa saafaa ilmaan Habashaafi sirni EPRDF uummata Oromoo tuffachaa, arrabsaafi arrabsiisaa dhiyeenya kana du’aa mootummaa naannoo Oromiyaa President Alamaayyoo Atoomsaa fi waldorgommii Ispoortii magaalaa Baahirdaritti gaggeeffame irratti salphina guddaa uummata keenya irratti rawwatame ijan argamee jira. Kana qofaa mitii eeyyama Oromoo malee Magaalawwaan Oromiyaa kanneen akka Burraayyuu, Sabbataa, Sulultaa, Holotaa, Sandafaa, Laga Xaafoo laga daadhii, Aqaaqii Qaallitii ,Duukam, Galaan bishooftuu, fi magaalota kannee akka Shashamannee, Adaamaa, Jimmaa, Neqemtee fi Amboo illee bulchiinsa Federaalaa jala galchuun leeccalloo achii irraa argamuufi Oromoo ittin jilbeffachisanii bituun umrii garbummaa dheeressuuf diini karoorsee uummata keenya irratti hojechaa jiraachuun ifatti ba’ee saaxilamee jira. Kanaaf ilmaan Oromoo diina duukaa dhabbachuun haa ga’u jenna.
Jaarraa amma geenye keessa yeroo biyyi lafaa bineensaafiyyuu carraa barnoota kennaa jirtutti Mootummaan abbaa irree EPRDF Baratoota Oromoo badii tokko malee sababa Oromummaa isaaniifi sirna Wayyaaneetti harka hinkennannu jedhaniif jumlaan barnoota irraa arii’aa, mana hidhaatti guuraa, ajjeesaa, fi biyya irra ari’ataa dararaan ilma namaa irratti raawwatamuu hinqabne nurratti rawwatamaa waan jiruuf qabsoo FDG jabeesinee ittifufuu murteessinee, rakkina kana keessaas of baasuun Oromiyaa bilisoomteefi ummanni keenya hiree isaa murteeffatee ofiin akka of buchuuf qabsoo sochii warraqsaa dimookisiifi bilisummaa Qeerroon gaggeessaa jiru gabrummaa bardhibbeetti furmaata waaraafi karaa waan ta’eef fincillee mirga keenya kabachiifachuuf bakka jirru gamtaan sagalee keenya haa dhageesifannu.
Akka guutuu Oromiyaatti yeroo ammaa kanatti qaala’insa jiruuf jireenyaa fi hojii dhabdummaan ija baasee dargaggoonni Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo akka Yuunibarsiitiifi Kolleejjota garaagara irraa sadarkaa barnoota dipiloomaa hanga Digrii 2ffaatti baratanii hojii dhabdee ta’uun dararama ilmi namaa hinargine argaa jiru. Sirni EPRDF sirna dabballee wallaalaafi ogummaa hinqabneen kan durfamu waan ta’eef of shakkii aangoo irraa ka’uun beektotaafi hayyoota Oromoo ogummaa isaniitiinillee lammii isaanii tajaajilanii akka of hinjiraachifneef beektota Oromoo moggaatti dhiibee, barattoota dargaggoota Oromoo hojii dhabdee taasiisuun karaa irra taa’ee dargaggeessi akka kadhatuuf saaxilee jira. Dhugaan kun har’a addunyaa biyya lafaaf ifaadha. Kanaafuu beektootnifi dargaggoon Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo irraa eebbifamuun jiruuf jireenyaan dararamaa jirtan dandeettiifi humna keessaniin qabsoo FDG sochii Warraaqsaa Qeerroon Bilisummaa Oromoo gaggeessaa jirutti gurmuunis ta’ee namtokkeen wal ijaaruun harka wal qabannee sirna wallaltotaafi humna qawween ijaarame kana diiguun mirga ummata keenyaafi bilisummaa keenya haa kabachiifannuun waamicha keenya.
Mootummaan shororkeessaafi abbaa irree kan ta’e Wayyaaneen TPLF humna afaan qawween aangoo irra kan ture sabaafi sablammii biyyattii gidduutti ibidda qabsiisuun walnyaachiisaa ofiif fayyadamaa ta’aa as ga’e wanti baay’ee nama ajaa’ibu sabuma tokkicha Oromoofi Oromoo gidduuttillee walitti bui’insa hinjirre qabsiisuun dhiiga wal dhangalaasisaa umrii dheereffatee, uummatni Oromoo lola Gumuziifi Oromoo, Sumaaleefi Oromoo, Oromoofi Bartaa, Oromoo fi Burjii Oromoo fi Geedi’oo gidduutti Wayyaneen qabsiisaa tureen lubbuun hedduun galaafatamee dhiigni dhangala’eera, tokkummaan ummatootaa laafffatee Wayyaaneef carraa ta’eera. Mootummaan abbaa irree amma illee uummata Oromoo Booraanaa fi Gujii saba tokkicha gidduutti tooftaa uummata shororkeessuu fi dhiigaa waldhangalaasiisuu gaggeessa jira. Ummaanni Oromoo hundi akeeka diinaa kana irratti dammaquun ummanni keenya bu’aa xixiqqoo irratti dhiiga waldhangalasuun carraa diinaaf banuu dhiifnee, diina wal nu nyaachisaa jiru abbaa irree EPRDF irratti gamtaan qabsaa’uuf ga’een dargaggootaa fi beektotaa olaanaa ta’uu ni hubachiifna.
Qabsoo Bilisummaa Oromoofi kabajamuu mirga Ummata Oromoof ittigaafatamuummaa guddaa kan of harkaa qabu numa dargaggoota Oromoo fi beektoota Oromoo sadarkaa garaa garaa irra jirru ta’uu jaabessinee hubachiifna. Goototni ilmaan Oromoo kaleessa utuu hanga kana hin baay’atiin, hin baratiin, walitti dhiyaatee hin marii’atiin fi teeknoloojii hin fayyadamiin eenyummaa ummataa keenyaa fi qabeenya Oromoon qabu tiksuun wareegama qaalii lubbuu, lafee itti cabsee dhiiga irratti cophsee Oromoo fi Oromiyaa har’aa kana nu dhaalchisee utuu diinaaf hin jilbeeffatiin bilisummaa keessanitti xumura godhadha ofiin of bulchaa jechuun wareegama tilmaama hinqabne kanfaluun seenaa keessatti bakka olaanaa qabaachuun darbaniiru. Nuti dhaloonni har’aa ittigaafatama seenaa jalaa of baasuufi Qabsoo Bilisummaa gootota keenyaan dhaalchifamnee fi bu’aa Qabsoo Oromoo ta’uu keenya beekuun eenyummaa, abbaa biyyummaa, sabboonummaa, fi bilisummaa keenya gonfachuuf yoomiyyuu caalaa yeroon gamtaan harka walqabannee biyya keessaafi biyyota hambaa garaagaraa keessatti FDG Qeerroon qabsiisee jiruu jabeessuun wareegama barbachiisa itti kanfallee bilisummaa keenya mirkaneeffannu amma jechuun Hogganni Qeerroo Bilisummaa Oromoo godinoota adda addaa bakka bu’anii Ebla 2/2014 haala yeroo irratti marii gochuun dhiha Oromiyaa magaalaa Jimmaa keessatti keessatti Ibsa Ejjennoo walgahii kanaa baaseen beeksisaee sochii gootuu Oromiyaa qabsiisuun isaa yaadatnoo dhihooti.
Ummaatni Oromoo Sochii qindaa’aa kana irratti Gootota Qeerroo Dargaggoota Oromoofi Barattoota oromoo waliin hiriiruun Qabsoo Bilisummaa Oromoo galiin ga’uuf tokkummaan falmaa irraa akka duubatti hindeebine Ayyaanaa Irreecha birraa bara 2015 irratti irbuu isaa bifa ajaa’ibaatiin jabeesse. Qeerroon Bilisummaa Oromoo tarsiimoo Warraaqsa FDG irraa gara Waqqaasaa Fincila Xumura Garbummaatti (FXG) jedhu gidduugaleessa godhachuun Warraaqsii Biyyoolessaa Oromiyaa godinaalee Oromiyaa cufa keessatti akka qabsiifamuuf haalduree Sochii Warraaqsaa Biyyooleessa Oromiyaa qindeessuun ummata waliin tokkummaan falmaan akka ittifufuuf murtii fudhate. Haa ta’u malee, Mootummaan Wayyaanee ummata Oromoo Oromummaan yakkee hidhuu, ajjeesuufi qabeenya Oromoo saamuu irratti argamu, gaaffii mirga abbaa biyyummaa uummata Oromootif deebii rasaasa taasisuuf kan murteeffate Master Plan Finfinnee addaan citee ture bara 2015 bifa haaraan deebsisee kaasuu danda’eera. Sochiin Warraaqsa Qeerroo Bilisummaa Oromoon durfamus ofirratti hirkachuun Ummata Oromoo qawweefi roorroo alagaaf hinjilbiiffatne qabsoof hiriirsuufi hirmaachisuun gaaffiin mirga abbaa biyyummaa hanga deebi’utti warraaqsi FGD mootummaa abbaa irree Wayyaanee jilbeeffachiisuu irratti qiyyaafate daran jabaatee falmaa hadhaawaa ittifufe. Haaluma kanaan Sochiin Fincila Diddaa Gabrummaa bifa qindaa’aa ta’een Sadaasa 12,2015 Giddugala Oromiyaa mara keessatti qabate.
Haala Kanaan Jaarmiyaan Qeerroo Bilisummaa Oromoo seenaa gootota Oromoo hundee godhachuun Ebla 15, bara 2017 ijaaramee bifa maraan socho’aa turuun injifatnoo irratti injifatnoolee goonfataa,guutuu Oromiyaa keessatti milkoomina seenaa keessatti ol aanaa ta’e galmeessaa fi sochii bifa ammayyeessaan duree ABO jalatti hojjechaa qabsoo FXG gara gara Sochii Fincila Xumura Gabrummaatti tarkaanfachiisuu danda’eera. Warraaqsi seena-qabeessi kuni aarsaa qabaatuyyuu Caasaa sirna Mootummaa Wayyaanee hundeen diiguun, mootummaan Wayyaanes carraa isa dhumaa yaallachuuf Oromiyaa Bulchiinsa Waraanaa jala galcheera.
Yeroo har’aa biyyattiin Humna Komaandi Poostiin bulaa jiraachuun eenyufuu ifadha. Haala sochii Warraaqsa Biyyoolessaa Oromiyaa kanaa keessatti lubbuun ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa’amanii tarkaanfii gara jabinaa waraanni Wayyaanee fudhateen galaafatamee jira. Hojjettoonni mootummaa barsiisota dabalatee hanga ammaatti 4000 ol eenyummaa isaaniin wal qabatee hojii irraa arihamanii jiru. Dararaan akkaanii ummata keenya irra gahee fi gahaa jira.
Kanaaf miidhaan fedhe gama mootummaa TPLFn ummata Oromoo irra gahu iyyuu gama biraan yeroon kun yeroo Qabsoon Bilisummaa Oromoo sadarkaa ol aanaatti tarkaanfatee jiru dha. Oromoon akka sabaatti uummata hundaaf kabajaa qabu, goota, jagnaa fi uummata guddaa tokkummaa qabu ta’uu hawaasa addunyatti agarsiiseera, agarsiisaas jira. Yeroo uummati Oromoo, “Ammaan booda cunqursaa, saamichaa fi hacuuccaa alagaa baachuu hindanda’u! Na gahe!” jedhee sirna roorriftuu alagaa of irraa darbuuf harka duwwaa diina meeshaa lolaa ammayyaa hidhate dura dhaabbatee murannoon wareegama barbaachisu baasaa jirutti yaadatamuufi yeroo Oromoon of hidhachiisaa jirudha. Oromoon, “Bilisummaa yookaan du’a!” jechuun yeroo falmaa hadhaawaa godhuuf murteeffatee ka’edha. Maayii irratti uummatni Oromoo mirga siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa humna qawween irraa sarbame wareegama barbaachisu baasee of harka galfachuuf dandeettii kan qabu tahuu hawaasa addunyaa hubachiiisuu barbaada.
Ummatni Oromoo qonnaan bulaan, Qeerroon (Daragaggoon) barataan, daldalaan, hojjattootni, beektotni walumaagala murnooti hawaasa Oromoo hundi Sochii Warraaqsa Biyyoolessa Oromiyaa keessatti ittifufiinsaan adeemaa jiru bifa qindaa’een daran cimsitanii akka cina-dhaabbattaniifi kufaatii sirna cunqursaa Wayyaaneetti xumura goonu waamicha dabarsa.
INJIFANNOON UMMATA OROMOOTF!
« Mooraa Jimma Yuunibarsiitii Keessatti Jala Bultiin GGO Ebla 11 Kabajame.